IMedallia: Thuthukisa Okuhlangenwe Nakho Kwekhasimende le-B2B | Martech Zone
IMedallia: Thuthukisa Okuhlangenwe nakho Kwekhasimende kwe-B2B
Ukuqonda nokulandelela ikhwalithi yesipiliyoni sakho samakhasimende jikelele kuya ngokuya kuba nzima ngoba amakhasimende akho athinta izingxenye eziningi kakhulu zenhlangano yakho. Njengoba abathengisi basebenzisa isoftware yokuhola-nokuxhumana, lawa mathuluzi wolwazi asetshenzisiwe awabizi nje kuphela futhi awasebenzi kahle, kepha angenza kube nzima ukuthi ube nombono ophelele wamakhasimende kanye nolwazi lwabo nenkampani yakho.
Amaqembu wokumaketha angaqonda kangcono kakhulu izingqinamba zamakhasimende lapho ebona umbono ohlangene wazo zonke izinhlobo zempendulo, ehlanganisa ukwaneliseka okuphelele / ubuhlobo ukubuka inhlolovo ngokweneliseka ngakunye kwamaphoyinti wokuxhumana abalulekile ahlanganisa okuhlangenwe nakho kwamakhasimende.
AmaMedallia ukunikezwa okusha kwe-B2B kwenza lokhu. Ikunikeza okungaphezu nje kokubona kokubuka kwamakhasimende akho ngesipiliyoni. Uthola isithombe esiphelele, wonke umbono wesipiliyoni bonke ababambiqhaza bamakhasimende akho abhekene nawo. Ubuhle balo mbono? Iqokomisa amathuba amakhulu okuthuthuka angaphansi kweminyango ngokwemvelo, amathuba okuthuthuka okuthi, yize kusobala kumakhasimende akho, angahle ashelele phakathi kwemifantu engaphakathi kwama-silos ezinkampani ze-B2B.
Isixazululo esivela eMedallia iqoqa impendulo kuzo zonke izindawo zokuthinta zamakhasimende iwebhusayithi, indawo, ukwesekwa, ukuthengisa okuqondile, nokusebenzisana kozakwethu — bese kubhaliswa leyo mpendulo ohlelweni oluhlanganisiwe olunikeza inkampani yakho umbono ofanayo kuyo yonke iminyango. Akuvumeli nje iminyango yakho ukuthi ibone ingxenye yebhizinisi elibhekene nayo; inika amandla amaqembu e-akhawunti yakho ukuthi aqonde impendulo ezingeni le-akhawunti futhi ivumele abaphathi bakho baqonde sonke isithombe sesipiliyoni samakhasimende akho.
Tags: b2b ikhasimende intelligenceb2b ukwaneliseka kwamakhasimendeimedali
I-Playnomics: Isibikezeli Samanani Okutholwa Kwensiza Yeselula (i-AVP)